Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyadda S.Ogadenya ee Victoria oo warbixin u soo bandhigay shirka qawmiyadaha
Jaaliyadda S.Ogadenya ee Victoria oo warbixin u soo bandhigay shirka qawmiyadaha
Maanta oo ey tahay 31 January 2014 waxey xubno ka mid ah Jaaliyada Soomaalida Ogadenia ee Victoria ka qeyb galeen shir ey soo qaban qaabiyeen urur dowlada Australia ka socda lana shaqeya qoomiyaadka kala duwan ee dalka Australia kunool.
Shirkaan oo muhimadiisa aheyd isbarasho iyo kala warqaadasho, ayaa xubnihii jaaliyada oga qeybgalay shirka waxeey so bandhigeen warbixin ku saabsan Jaaliyada Soomaalida Ogadenia iyo dulmigaa lagu hayo shacabka kasoo jeeda Soomaalida Ogadenia. Waxeey kaloo soo bandhigeen sida ey diyaar ugu yihin wada shaqeyntaa Qoomiyadka kala duwan ee dalka Australia Ku nool.
Shirkaan ayaa waxeey jaaliyada u aheyd fursad aad u wanagsan halkaas oo ey ku yeesheen saaxibo dalka Australia kasojeeda iyo fursad ey kula kulmaan hay’ado dhanka xasuqa dumarka qaabilsan. Shirka ayaa jawi wanagsan ku dhamaaday qeybtiisa labadanna laqabdoon bilaha soosocdaa hadii Alle idmo.